Talooyin Nadiifinta - Ningbo BestCleaner Co., Ltd
BVC caawimaad Coobbi aad qaban xisbiga BBQ oo aan ka baqin shaqo nadiif ah.
Waxaad leedahay saaxiibo badan oo aad rabto inaad iyaga la yaab, sababta aan iyaga la yaab by marti xisbiga BBQ ah? Ha u ogolaan guriga qas ka heli jidka ku riyaaqayaa waqtiga aad saaxiibo fiican oo qaar ka mid ah. Halkan waxaa ku qoran qorshe 5 talaabo si ay u caawiyaan aad guriga aad u nadiifiso - stress lahayn, kaliya si sahlan loo fuliyo shaqooyinkaasi. Sidaas daraaddeed halkaas oo si aad u bilowdo? Waayo, xisbiga BBQ ah, martida loo faqri doonaa waqtigooda inta badan ka baxsan, oo sidaas daraaddeed meelaha ugu muhiimsan ee si aad u nadiifiso guriga waxaa laga galo, qolka, jikada iyo musqusha nool. Looma baahna in la nadiifiyo guriga oo dhan laakiin halkii ay diiradda saaraan waddada xisbiga - dadka intooda badan ee dareenka noqon doonaa on loox, armaajo iyo meelaha la dhigay cabitaanka ay.
1. Fresh & Declutter gurigaaga.
Ka hor inta aadan bilaabin, la furo dhowr daaqadaha hawada looga saaro gurigaaga sidaa daraadeed waxa la ur cusub oo nadiif ah. Shidida shumac carafta leh ama ku xereen aad meel la deodoriser ku darayaa caraf udgoon qaar ka mid ah oo dhigaya niyadda ah. Next waxa la joogaa wakhtigii si wax looga qabto meelaha wax waddada xisbiga in ay yihiin haday qaabkii. Helitaanka meelaha ku meel gaar ah in ay ku riday oo dhan alaabta aan loo baahnayn sida dambiisha lagu dhaqdo ama sanduuqa ay ku kaydiso ilaa xisbiga ay ka badan tahay ayaa ah xalka ugu wanaagsan oo fudud.
2. Ku nadiifi aad Door Gate iyo Entrance
Waxa ugu horeeya ee guests aad arki doontaa waa laga galo sidaas darteed waa lagama maarmaan in la sameeyo a aragti marka hore wanaagsan. Ma howlgal deg deg ah ka baxsan, takhalusaya wasakh kasta. Markaas iska dhigi gudaha iyo samayn howlgal ku hareeraysan hall galo aad, nadiifinta aruuray kasta oo gashanno kabaha, jaakado, koofiyado iyo mail hortiisa. Boodhka ka miisaska ama walxaha madaxtooyada iyo buufin deodoriser qaar ka mid ah.
3. fahanno Nool Room
Bilow qaadaaya soo baxay mid ka mid ah waxyaabaha meel, toosinta Sariiro, Barkimo, barkimooyin iyo refolding gana Dambiga (ku weyn for daboolaya kor kasta Wasaqda - si kastaba ha ahaatee ma waxaad u baahan doontaa inaad tan sameyso ka dib markii mid ka mid ah waxyaabaha BVC). Next nadiifiyo miiska, screen TV iyo meelaha kale ee boodhka adigoo isticmaalaya maro microfiber ah. Ugu dambeyntii, xaaqdo ilaa ciidda ama xayawaanka timaha dabaqa, oo ha ilaawin inaad nadiifisid loox albaaka adiga oo isticmaalaya aad vacuum ee burush ama tuubada lifaaqa.
4.Clean Jikada ah
dhibic First of weerar waa inuu ku soo bilowdo nadiifinta aad saxanka ka mid ah suxuunta wasakh; . Haddii aad leedahay makiinadda kaliya iyaga siin luqluqdo iyo iyaga oo ku leenahay Markaas waaskada siiyo nadiifinta wanaagsan - waa inay noqdaan nadiifsan, berkedda birqayso marka aad samaysay - nadiifiye BVC hubaal shaqo this ka dhigi doonaa inta badan ka sahlan! Next nadiifiso dushooda counter aad, xirxiraan qalabka aan loo baahnayn iyo ka tirtiri miiska la buufiyo jikada iyo maro microfiber ama masarka tuuro. Waxaad sidaas oo kale sameeyaan kartaa cunto kariye, armaajooyinka iyo qaboojiyaha. Waxa kale oo laga yaabaa in fikrad fiican si aad u nadiifiso ilaa aad gudaha qaboojiyaha, rearranging qolka for appetisers, cabitaanka iyo goodies kale. Ugu dambeyntii, uumi Xaaq dhulka si loo hubiyo in aad jikada waa spick iyo taako.
5.Last laakiin aan ugu wax nadiif ah Musqusha meesha quduuska ah
Leaving qolka ugu muhiimsan ee la soo dhaafay - musqusha waa qolka waa in aad diiradda inteeda badan aad fiiro on. Hadda taa macnaheedu ma aha in aad leedahay si aad u hesho hoos on gacmaha iyo jilbaha iyo xoqin dhulka, laakiin halkii, nadiifinta waxyaalaha guests ugu isticmaali doonaa sida musqusha, muraayad, dego iyo counter. Bilow xirxiraan iska dhammaan waxyaabaha countertop wiifto galay golaha wasiirada ama meel kasta oo ka mid ah hortiisa, raaceen by siinta waaskada, countertop iyo buugii nadiifinta wanaagsan leh oo dhan-Ujeeddada nadiifinta ama nadiifiye BVC ah. Next nadiifiso aad musqusha - gudaha, kursiga, qar iyo bannaanka, iyo in la hubiyo in aad bedeli aad musqusha duudduuban jira mid cusub. Ku dar qaar ka mid ah deodoriser ama shumac waxyaabaha udugga leh si ay u abuuraan dareen HBS in. Sidoo kale ha ilaawin inaad meel shukumaan cusub, cusub iyo qalafsaneyn gacantiisa soo. Ugu dambeyntii, siin sagxada musqusha a xaaqinta uumi wanaagsan oo aad samaysay oo dhan.
Waa sida ugu fudud ee ah in la qorshaha 5 talaabo - ha nadiifinta heli jidka aad waqti udiyaarin xisbiga.
Easy nagu heli lahayd.
ee joogaan si ay u ogaadaan
Hel ugu dambeeyay news, ururinta iyo dalabyo toos ah u aad mailkooda u dhiibay. Inquiry For Pricelist